Nceda endaweni le yombhalo bucala nkqubo nawe. Nceda ufake naliphi cookies ezongeziweyo website yakho isebenzisa ngezantsi (umzekelo, Google Analytics)
Lo mgaqo-nkqubo wabucala umisela olusebenzisa ngayo kwaye ikhusela naluphi na ulwazi unika xa usebenzisa le website. lizibophelele ekuqinisekiseni ukuba ukhuseleko kwakho likhuselwe. Ukuba sikucela ukuba ukhuphe iinkcukacha ezithile ngawo wena unako kuchongwa xa kusetyenziswa le website, ngoko qiniseka ukuba kuya kusetyenziswa kuphela ngokungqinelana nale ngxelo yeemfihlo. zingatshintsha le nkqubo ixesha nexesha ngokuhlaziya kweli phepha. Kufuneka ukhangele oku phepha amaxesha ngamaxesha ukuqinisekisa ukuba ninoyolo kunye naluphi na utshintsho.
Sinokuqokelela le nkcazelo ilandelayo:
qhagamshelana ulwazi kuquka idilesi yemeyile
iinkcukacha ngendawo okuyo ezifana yeposi, ulwazi kunye nomdla
enye ingcaciso efanelekileyo luvo umthengi kunye / okanye anika
Kuba uluhlu kwayo lwe cookies siqokelela ukubona Uluhlu cookies siqokelela icandelo.
Senza ntoni ulwazi sithontelene
Siya kufuna le ngcaciso ukuqonda iimfuno zakho kwaye akunike ngenkonzo ebhetele, kwaye ingakumbi ngenxa yezi zizathu zilandelayo:
nokugcinwa kweerekhodi yangaphakathi.
Sisenokusebenzisa iinkcukacha ukuphucula iimveliso kunye neenkonzo zethu.
Ukuze ngamathuba ukuthumela iimeyile ezithengisa iimveliso ezintsha, zizibonelelo ezithile okanye olunye ulwazi apho sicinga usenokufumanisa usebenzisa idilesi ye email osinike umdla.
Amaxesha ngamaxesha, ukuze nabo ukusebenzisa ulwazi lwakho ukuqhagamshelana nawe ngeenjongo zophando emarikeni. Sinokuthetha kuwe ngemeyile, umnxeba, ifeksi okanye ngeposi. Sisenokusebenzisa iinkcukacha ngokusesikweni website ngokomdla wakho.
Sizimisele ukuqinisekisa ukuba inkcazelo yakho ukholosile. Ukuze kuthintelwe ufikelelo olungagunyaziswanga okanye ukuveza, siye ubeke endaweni iinkqubo ezifanelekileyo emzimbeni, electronic kunye neyolawulo ukulondoloza kukhuseleke iinkcukacha esiziqokelelayo intanethi.
A cookie ifayile encinane ucela imvume kufakwa kwi hard drive yekhompyutha yakho. Xa uvuma, lwefayile kongezwe kwaye cookie inceda ukuhlalutya kwezithuthi web okanye ikuvumela ukuba wazi xa utyelela site ethile. Cookies ukuvumela izicelo web ukusabela kuwe njengomntu ngamnye. Isicelo web ungayitshintsha imisebenzi zayo ngokweemfuno zakho, azithandayo nangazithandiyo ngokuqokelela nokukhumbula ulwazi malunga iinketho zakho.
Sisebenzisa log cookies yendlela ukuqaphela ukuba zeziphi amaphepha ziyasetyenziswa. Oku kusinceda kuphonononga idatha malunga web page kwezithuthi nokuphucula website yethu ukuze alungiselele ukuba iimfuno zabathengi. Sisebenzisa kuphela le nkcazelo ngeenjongo Uhlalutyo lwamanani kwaye ngoko data liyasuswa kwinkqubo.
Lilonke, cookies kusinceda kukunika website ngcono, ngokuvumela ukuba esweni apho amaphepha ukufumana kuluncedo kwaye o nga. A cookie akukho ndlela kusinika ukufikelela kwi khomputha yakho okanye naluphi na ulwazi ngawe, ngaphandle idata ukhethe ukwabelana nathi. Ungakhetha ukwamkela okanye ukwala cookies. Abaninzi bencwadi be web ngokuzenzekela ikuki, kodwa ungazilungisa izicwangciso zebrawuza yakho kuba zale iikuki xa ukhetha. Oku kunokukhusela ukuba siwasebenzise ngokupheleleyo kwe-website.
UQhagamshelwano nezinye websites
website yethu singaqulatha unxulumaniso nezinye websites umdla. Noko ke, xa abasebenzise ezi iilinki ukushiya site yethu, kufuneka uqaphele ukuba awunayo na ulawulo ukuba ezinye website. Ngoko ke, ungakwazi kuba noxanduva ngokhuseleko yabucala ulwazi obanike ngelixa betyelela kwiziza kwaye iziza alulawulwa le ngexelo yabucala thina. Kufuneka bazikhusela ajonge ingxelo yabucala esebenzayo lewebhu lemibuzo.
Ukulawula inkcazelo yakho yobuqu
Ungakhetha nokuthintela ukuqokelelwa okanye ukusetyenziswa inkcazelo yakho yobuqu ngezi ndlela zilandelayo:
xa uya kucelwa ukuba ugcwalise ifomu kwi-website, khangela le bhokisi unganqakraza ukubonisa ukuba awufuni ulwazi asetyenziswe nabani ngeenjongo urhwebo ngqo
ukuba ngaphambili wavuma kuthi usebenzisa iinkcukacha zakho ngeenjongo zentengiso ethe ngqo, ukuze utshintshe ingqondo yakho nangaliphi na ixesha ngokubhalela okanye imeyile apha nathi sales@armati.biz
Asiyi athengise, ukusasaza okanye aqeshise iinkcukacha zakho ukuba amaqela esithathu ngaphandle kokuba imvume yakho okanye Kufunwa ngumthetho ukuba enze njalo. Sisenokusebenzisa iinkcukacha zakho zobuqu ukuthumela ulwazi ezithengisa wesithathu apho sicinga ukuba kusenokuba umdla ukuba usixelele ukuba unqwenela oku ukuba kwenzeke.
Unakho ukucela iinkcukacha inkcazelo yobuqu apho ngawe phantsi woKhuseleko Data Act 1998. Intlawulo encinci ziya kuhlawulwa. Ukuba ungathanda ikopi ulwazi olugcinwe kuwe nceda ubhalele.
Ukuba uyakholelwa ukuba naluphi na ulwazi sifumene phezu kwakho ezingachanekanga okanye engaphelelanga, nceda ubhalele okanye email nathi kamsinya kangangoko kunokwenzeka, kule dilesi ingentla. Siya ngokukhawuleza silungise naluphi na ulwazi kufumaniseke ukuba ayichanekanga.
Uluhlu cookies siqokelela
Le theyibhile ingezantsi udwelisa cookies esiyiqokelele yintoni ulwazi sigcine.
Ukunxulumana kwinqwelo yakho yokuthengela.
Igcina udidi info kwiphepha, evumela ukubonisa amaphepha ngokukhawuleza.
Izinto onazo kuluhlu Products Thelekisa.
Inohlobo ochaziweyo id yakho abathengi kunye evenkileni.
Isibonisi ukuba ngoku ayilogwanga evenkileni.
Inohlobo oluvaliweyo kwiqela yabaxhasi okulo.
Igcina ID Customer yeengcandelo
Iflegi, nto leyo ibonisa ukuba esisikhupheli ukhubazekile okanye hayi.
Wena sesssion ID kwi umncedisi.
Ikuvumela iindwendwe ukuhlela odolo zazo.
Olu didi yokugqibela nandivelela.
Imveliso oluninzi olusandukubakho owaboniseleyo.
Ibonisa ukuba umyalezo omtsha sifunyenwe.
Ibonisa ukuba oko kuvunyelwa ukusebenzisa efihlakeleyo.
Ikhonkco ulwazi malunga inqwelo yakho nokubukela imbali ukuba ucele isayithi.
I-ID nayiphi ngokweentloko kutshanje uye wavota.
Iinkcukacha ngezinto ngokweentloko ukuba avotelwe.
Izinto obusandul kuthelekiswa.
Ulwazi iimveliso ukuba imeyile kubahlobo.
Yemboniselo okanye ulwimi ivenkile ukuba ekhethiweyo.
Ibonisa ukuba umthengi kuvunyelwa ukusebenzisa cookies.
Iimveliso obusandul kujongwa.
Uluhlu ofihliweyo iimveliso zongeza Uluhlulomnqweno yakho.
Inani lezinto kwi Uluhlulomnqweno yakho.